Kiniiniyada ugu wanaagsan ee Android ee la bixiyo Maalinta Aabbaha | Androidsis
Kiniiniyada ugu wanaagsan ee Android ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
Ignacio Sala | | Kiniiniyada Android
On Maarso 19, Maalinta Aabbaha waxaa loo dabaaldegaa, maalin fantastik ah oo lala dabaaldego qoyskeenna waana sidoo kale cudurdaarka ugu habboon cusbooneysii qalab kale in aan guriga ku haysano, ama casriga ha ahaato, kiniin ama u bood bood ilaa smartwatches.
Hadday ahaan lahayd aabbahaa ama naftaada, is-siinta hadiyadu mararka qaarkood waa habka ugu wanaagsan ee lagu helo waxa aan dooneyno. Hadday kiniini tahay, markaas ayaan ku tusaynaa adiga kiniiniyada ugu fiican ee Android siinta maalinta Aabbaha ee aan ka heli karno Amazon.
Telefoonada casriga ah ee ugufiican ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
1 Kiniin noocee ah ayaan u baahan nahay?
2 Laga soo bilaabo 100 illaa 300 euro
3 Laga soo bilaabo 300 illaa 500 euro
4 In kabadan 500 oo euro
Kiniin noocee ah ayaan u baahan nahay?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan samayno ka hor intaanan iibsan kiniiniga ugu horreeya ee aan ku jecel nahay bilicsanaanta ama faa'iidooyinka ay na siiso awgeed, waa inaan istaagno oo aan ka fikirno isticmaalka aan siin doonno. Haddii isticmaalka aan siin doonno kiniinka uu yahay isticmaalka warbaahinta maqalka ah, tayada sare ee shaashadda, ayaa ka sii wanaagsan tan.
Haddii isticmaalka aan siin doonno uu yahay mid loogu talagalay hubi shabakadaha bulshada, ka jawaab emaylka iyo akhri boggaga internetka, ficil ahaan kiniin kasta ayaa la kulmi doona ujeedadaas, sidaa darteed maahan inaan doorano moodooyinka ugu dhameystiran maadaama aanan sifiican uga faa'iideysan doonin.
Muuqaal kale oo ay tahay inaan tixgelinno waa haddii aan rabno kaniiniga si joogto ah loo cusbooneysiiyaa (tan ugu badan ee lagu taliyay) in laga ilaaliyo marwalba dhibaato kasta oo xaga amaanka ah oo lagu ogaado labada Android iyo lakabyada qaabeynta soosaarayaasha.
Hadaan rabno kaniiniga ugu faa'iido badan, u isticmaal si aad u sawirto, u sameyso qoraallo, aad wax uga beddesho fiidiyowyada iyo sawirrada ... tirada xulashooyinka ku jira Android si weyn ayaa loo dhimay, maadaama Samsung oo keliya ay awood u leedahay inay bixiso moodallo lagu daboolayo baahiyahan.
Ku saabsan dammaanadda. Adiga oo ku siinaya moodooyinka kiniiniga ah ee leh qiimaha ugu fiican ee lacag ee aan ka heli karno Amazon, wax dhibaato ah nagama yeelan doonto dammaanadda, maadaama tani ay tahay laba sano. Haddii sabab kasta ha noqotee kiniinku uu joojiyo inuu shaqeeyo ama aan la hagaajin karin, muddadaas labada sano ah, waan sameyn doonnaa waxay beddeli doonaan qalabka.
Laga soo bilaabo 100 illaa 300 euro
Samsung waa mid ka mid ah shirkadaha wax soo saarka yar, haddii aysan ahayn kan kaliya ee naga saara kiniiniyada dhammaan qiimaha iyo faa'iidooyinka, kala duwanaanta soo gelida oo ah Galaxy Tab A.
Qeybtaan, waxaan ka helnaa Galaxy Tab A7, oo ah kiniin leh Shaashadda 10.4 inji, oo ay maamusho Android 10 waana nooc ku habboon in lagu cuno nuxurka maaddooyinka badan iyo la tasho shabakadaha bulshada. The Galaxy Tab A7 waxaa laga heli karaa Amazon lacag dhan 195,80 euro.
Haddii Galaxy TAb A7 waxoogaa ka yar tahay miisaaniyaddaada, ikhtiyaar aad u fiican ayaa laga heli karaa Galaxy Tab A 8.0, kiniin ah 8 inji oo waxoogaa ka hooseeya waxqabadka Galaxy Tab A7 iyo sidoo kale inay ku habboon tahay baahinta isticmaalka fiidiyowga iyo la-tashiga shabakadaha bulshada. The Galaxy Tab A8.0 waxaa laga heli karaa Amazon 132 euro.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo kujira qiimahaan qiimaha ah waxaa laga helayaa Huawei MediaPad T5, oo ah kiniin kayar 200 euro ayaa na siinaya Shaashadda 10.1-inji, 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah gudahana waxaan ka helaynaa Android 8.
Qaabkan ayaa ah ay maamusho adeegyada Google, sidaa darteed wax dhibaato ah kuma la kulmi doonno mustaqbalka inaan ku rakibno codsiyo ka socda Play Store. The Huawei MediaPad T5 waxaa loo heli karaa 189 euro oo ku yaal Amazon.
Soo saaraha Aasiya Lenovo wuxuu na siiyaa M10, kiniin leh a 10.3 inch screen, oo ay maamusho processor-ka MediaTek ee Helio P22T oo wata 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah, meel lagu keydiyo oo aan balaarin karno ilaa 256 GB. Qiimahiisu waa 199 euro on Amazon.
Laga soo bilaabo 300 illaa 500 euro
Haddii aad rabto inaad bilowdo inaad wax badan ka faa'iideysato kaniiniga oo u isticmaal sidii beddel u ah laptop-dhexdhexaad ah, ka Galaxy Tab S6 Lite, waa ikhtiyaar aad u fiican. Moodelkan waxaa maamula processor 8-core ah, wuxuu leeyahay shaashad 10.4-inji ah, 4 GB oo RAM ah waxaana lagu heli karaa noocyo leh 64 iyo 128 GB oo keyd ah.
Dhinaca dambe, waxaan ka helaynaa kamarad 8 MP ah iyo kamarad 5 MP ah oo ku habboon sameynta wicitaanno fiidiyoow ah. Isku dar S Pen, sidaa darteed waxaan u isticmaali karnaa inaan ku sameyno sharraxaad, sawir ama wixii kale oo maskaxdaada ku soo dhaca halka stylus uu aad ugu raaxeysan yahay in fartaada lagu isticmaalo. Qiimaha ah Galaxy Tab S6 Lite waa 315 euro.
Huawei MediaPad M6 wuxuu na siiyaa a 10,8-inji 2K shaashad ah, 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah. Gudaha waxaa ku jira processor-ka Kirin 980 mana laga heli karo adeegyada Google, inkasta oo aan rakibi karno dhib la'aan.
Iyada oo batari ka badan 7.000 Mah, aan ku raaxeysan karno ilaa 12 saacadood oo muuqaal fiidiyoow ah iyo 7 saacadood oo ah ciyaaraha ugu baahida badan. Codka 4-ku hadla waxaa bixinaya Harman Kardon. Qiimaheedu waa 319 euro.
In kasta oo diidmada qayaxan ee dowladda Mareykanka ay jirto, shirkadda Huawei waxay sii wadaa soo saarista alaabooyin aad u wanaagsan, oo isugu jira kiniin iyo qaab casriga ah. Qeybaha kiniiniyada, waxaan ka helnay Huawei MediaPad Pro, oo ah kiniin leh a 10.8-inji shaashad leh IPS panel, xallinta FullHD.
Gudaha, waxaad ka heli doontaa processor-ka Kirin 990, 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah. Waxaa ku jira M-Pencil, oo ah erey aan ku soo bandhigi karno mala-awaalkeenna. Kuma jiraan adeegyada Google, laakiin in yar oo dulqaad leh iyo baaritaanka internetka, waan rakibi karnaa iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin.
La Huawei MediaPad Pro waxaa laga heli karaa Amazon oo ah 478 euro.
In kabadan 500 oo euro
Qeybta kiniinnada ee ka badan 500 euro, waxaan kaliya ka heli karnaa hal soo saare: Samsung. Samsung ayaa diyaar noo ah Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7 +. Waxaan sidoo kale heli karnaa Galaxy Tab S6, laakiin qiimaheeda oo sarreeya marka loo eego qaababkan cusub, shaqsiyan uma arko inay tahay ikhtiyaar wanaagsan in la tixgeliyo.
Galaxy Tab S7 wuxuu leeyahay Shaashad 11-inji ah oo leh 120 Hz cusbooneysiin ah, sidaas darteed waa ku habboon tahay in lagu raaxeysto dareeraha cayaaraha oo aanan awoodi doonin inaan ka helno moodooyinka kale, dareeraha oo sidoo kale la ogaan karo, iyo wax badan, markaad daalacaneysid shabakadaha bulshada iyo bogagga internetka.
Processor-ka qaabkani waa Qalabka 8 waxaana soo saaray Samsung. Ku xigta processor-ka, waxaan helnaa 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah. Haddii booskani gaabiyo, waxaan dooran karnaa qaabka leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah.
Dhabarka gadaashiisa waxaan ka heleynaa kamarad 13 MP ah iyo kamarad 5 MP ah si loogu sameeyo wicitaano fiidiyoow ah. Waxaa ka mid ah S Pen si aan u sii daayo maleheena.
Qiimaha Galaxy Tab S7 oo ku taal Amazon waa 579 euro loogu talagalay nooca leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah.
Qaabkani wuxuu si ficil ahaan ah u wadaagayaa qeexitaannada la mid ah Galaxy Tab S7, laakiin kan shaashadu waa 12.4 inji halka processor-ku uu yahay Snapdragon 865 8-core Qualcomm.
Nooca leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah ayaa loo heli karaa 749 euro, halka tusaalaha leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah ayaa gaaraya ilaa 829 euro.
Waxaan sidoo kale haysannaa nooc leh 5G isku xirnaanta, 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah 1.049 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Kiniiniyada ugu wanaagsan ee Android ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
13-ka barnaamij ee e-mayl ee ugu wanaagsan mobiladaada Android